Zvitoro zveApple Zvinokoka Vashandisi veWiricheya Kuti Vayedze WatchOS 3 Kuongorora | Ndinobva mac
Mumashoko ekupedzisira ekupedzisira, Apple yakatiratidza nhau dzese dzinosvika mumwedzi waGunyana apo kambani yeCompertino-based kusunungura shanduro dzekupedzisira dzeMacOS Sierra, iOS 10, watchOS 3 uye tvOS 10. Chimwe chezvinhu zvitsva zvisina kutaurwa nezvakawanda zvine chekuita nebasa idzva iro rinotendera kuongorora zvinoitwa nevanhu vanofamba newiricheya.
Kuyedza kunzwisisa uye kuwedzera kunatsiridza mashandiro ayo, iyo Cupertino-based kambani Iwe wakoka boka revashandisi vewiricheya kune akati wandei maApple Stores kuyedza yechitatu vhezheni yeanoshanda system yeApple Watch, iri parizvino iri beta.
Pamusangano weVashanduri, Health & Fitness Apps Director Jay Blahnik vakati kambani iyi yakagadzira nhanho huru kuenda sanganisa chiitiko chekutarisa kwevashandisi vemawiricheya mune yechitatu vhezheni yeWOSOS. Izvo zvinosanganisirawo maviri akasiyana maitiro echirongwa, pamwe nezviziviso zvekuzorora kwechinguva kana kufamba nekuti tanga tiri munzvimbo imwechete kwenguva yakareba. Iri basa rakafanana chaizvo neiro ratingawana paApple Watch patakagara kwenguva yakareba tisina kusimuka kuti titambanudze makumbo.
Munguva yakapfuura, kambani yakabvumidza vashandi vayo vemuchitoro kuwana mazino e beta eIOS uye OS X chete, kuchengetedza chete watchOS kune vanogadzira, Nekuda kwezvirambidzo kana zvasvika pakuderedza chishandiso, chimwe chinhu icho vagadziri vasingakwanise kuita zvakananga asi vanofanirwa kuenda kuApple Store kuti zviitwe ikoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvitoro zveApple Zvinokoka Vashandisi veWiricheya Kuedza WatchOS 3 Kuongorora
Jaime Aranguren akadaro
Ini handisi munhu anoshandisa wiricheya, asi ndinoshandisa sikuta kutenderera mumugwagwa
Pindura Jaime Aranguren